AKHRISO: Q/1-aad dhacdooyinkii ugu waa weynaa Ee SoomaaliyaKa Dhacay Sanadkii 2017 | HobyoNet.Com
Monday, January 1st, 2018 | Posted by news1
Akhristiyaasheena sharafta leh ee ku xiran Page-ka Hobyonet.com waxaan halkan idin kugu soo gudbineynaa dhacdooyinkii ugu waa weynee ee Soomaaliya sanadkii tagay 2017. maanta waa weybta 1-aad Saddexda bil ee kala ah January, February iyo March ayaan idin soo diyaarinay.
Janaayo, 02, 2017-Qaraxyo iyo Weerar toos ah ayaa lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Qaraxa labaad ayaa lagu weeraray wadada u dhaxeysa garoonka diyaaradaha dhinaca albaabada Madiino Gate iyo hotelka PEACE.
Janaayo, 05,2017–Madaxweynihii Hore Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka xarunta KMG ah Aqalka Sare ee Barlamaanka, iyadoo dhanka kale uu furay Kalfadhigii koowaad ee Aqalka Sare.
Janaayo, 10, 2017 -xildhibaannada Galmudug ayaa kalsoonidii kala laabtay
Janaayo, 11. 2017 Waxaa dalka ka dhacday doorashada Guddoonka Golaha shacabka waxaana la soo gabagabeeyay tirada codadka wareegii koowaad ee doorashada oo ay ku tartamayeen ilaa afar musharax.
 Pror Max’ed Cismaan Jawaari [141 cod]
 C/rashiid Max’ed Xidig [ 97 cod ]
 C/fitaax Max’ed Ibraahim Geeseey [17 cod]
 Idir Aadan Dhakhtar [2 cod]
22- Janaayo, 20017 Senator Cabdi xaashi Cabdullaahi ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiyaha Aqalka sare ee Soomaaliya.
Janaayo, 25, 2017 Qaraxyo iyo Weerar toos ah oo lagu qaaday Hoteelka Dayax ee Muqdisho waxaa ku dhintay ku dhawaad 30 qof oo isugu jiray odayaal dhaqameed Xildhibaano ka soo jeeda Koonfurgalbeed iyo dad shacab ah.
Arbaco, Feberaayo,01, 2017 –Kooxda Daacish ayaa maydka seddex askari oo ka tirsan ciidamada Puntland soo dhigtay jidka dheer ee isku xira degmada Qandala iyo Bosaaso ,waxaana sida la sheegay askartan ay ahayeen kuwa la gowracay.
Feberaayo, 02, 2017 – Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague, ayaa aqbashay inay dhageysato dacwadda Soomaaliya ay gudbisay ee ku saabsaneyd muranka badda ee Soomaaliya iyo kenya u dhaxeeysa.
Feberaayo, 18, 2017–Waxaa lagu dilay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho afhayeenkii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb Maxamed Cumar Hagafeey.
Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ku sugnaa, dad u badnaa ganacsatada suuqa, waxaana suuqa uu ku dhowyahay isgoyska “Kaawa-Godey”.
Maarso, 07, 2017 –Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antnio Guterres, ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Magaaladda Muqdishu.
Maarso, 21, 2017 – Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa ku dhawaaqay xubnaha gollaha wasiirada xukuumada cusub ee Soomaaliya oo ka kooban 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen,15 wasiiru-dowle iyo hal ra’iisal wasaare ku-xigeen.